Ukudla grade Carboxymethyl cellulose sodium (CMC) - Shanghai Chem Thembeka. Co., Ltd
Sodium Carboxymethyl cellulose (CMC) kuyinto powder emhlophe noma aphuzi ukuthi ayinaphunga, kunganambitheki futhi non-toxic.It has hygroscopicity okusezingeni eliphezulu futhi oncibilikayo emanzini ukwakha uketshezi obukhulu. Kuyinto electrolyte polyanionic hhayi fermented.It has ezinhle ukushisa-ukuzinza .resistance nosawoti impahla ifilimu ukwakha. amaprotheni 1.Prevent ngobisi acid esuka ushintsha uba yileli, simondzawo laminating. 2.Due ukuba bushelelezi ushukela nokunamathisela esimweni saso engavamile ngemva ancibilikisa, ke ukwenza isiphuzo lizwakale limnandi futhi abushelelezi. 3.Its ezinhle ngisho ...
sodium Carboxymethyl cellulose ( CMC ) kuyinto powder emhlophe noma aphuzi ukuthi ayinaphunga, kunganambitheki futhi non-toxic.It has hygroscopicity okusezingeni eliphezulu futhi oncibilikayo emanzini ukwakha uketshezi obukhulu. Kuyinto electrolyte polyanionic hhayi fermented.It has ezinhle ukushisa-ukuzinza .resistance nosawoti impahla ifilimu ukwakha.
amaprotheni 1.Prevent ngobisi acid esuka ushintsha uba yileli, simondzawo laminating.
2.Due ukuba bushelelezi ushukela nokunamathisela esimweni saso engavamile ngemva ancibilikisa, ke ukwenza isiphuzo lizwakale limnandi futhi abushelelezi.
evenness 3.Its ezinhle kanye ukumelana acid inikeza isiphuzo nge ukuzinza kakhulu
4.Effectively ngcono kwemifantu noma ukudilika ka ishq ukuncibilikisa isici ngempumelelo.
Degree of esikhundleni (DS)
Viscosity (in 2% Amanzi
Chloride (Njengoba Cl - ),%
heavy metal (njengoba PB),%
Iron (njengoba Fe) ,%
Arsenic (njengoba Njengoba) ,%
Ngokusho umsebenzisi ' funa s
4.Ezokuthutha kanye nokugcina impahla
Olandelayo: Industrial grade Carboxymethyl cellulose (CMC)